डिजिटल बैंकिङ्ग कारोबार, कोरोनालाई छेकबार – Chitwan Post
- अनन्तमान श्रेष्ठ
हालैको कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने लक्षण देखिएको छ । विश्वका जतिसुकै शक्तिशाली वा महाशक्तिशाली देश हौँ भने पनि ती देशहरुमा भएको शस्त्रअस्त्रलाई यो भाइरसले निस्तेज पारी दिएको छ । कतिपयले यो महामारीलाई तेस्रो विश्वयुद्धको रुपमा पनि संज्ञा दिएका छन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई यो भाइरसबाट जोगिने एक उपयुक्त माध्यमको रुपमा अपनाइएको छ, किनभने यसको उपचार हालसम्म पत्ता लागेको छैन । मानिसहरु घरभित्र बन्द रहे पनि दैनिक जीवनको आवश्यकताहरु पूरा गर्न बाध्य हुनु परेको छ । मौज्दात राख्न मिल्ने खाद्यवस्तु पहिल्यै खरिद गरी सञ्चित राखेको भए पनि मौज्दात राख्न नमिल्ने र पूर्वानुमान नगरिएका खर्चहरु गर्नैपर्ने अवस्था हाम्रो आजभोलिको दैनिक जीवनमा अद्यापि छ ।
बन्दाबन्दीको दिनहरु बढ्दै जाँदा दैनिक जीवनका आवश्यक वस्तुहरु पाउन असहज हुनु, सञ्चय गरेको नगद रकम क्रमशः कमी हुँदै जानु, अस्वाभाविक खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाईं आउनु स्वाभाविक हो । बन्दाबन्दीको अवधि कति समयको रहन्छ भन्ने हामी पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यो, जति जति लम्बिँदै जान्छ, नगद व्यवस्थापनमा त्यति समस्या बढ्दै जाने र नगद पैसा आफैँमा कोरोना भाइरसको संवाहक पनि हुनसक्ने सम्भावना त्यत्तीकै बढी छ । विश्वस्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन नगदको कारोबारको सट्टा डिजिटल कारोबारमा जोड दिन संसारभरका मानिसहरुलाई अनुरोध गरेको छ । तर, विडम्बना ! हाम्रो वरपर हाल वस्तु तथा सामग्रीहरु खरिद गर्दा नगद कारोबारको अत्याधिक प्रयोग भएको पाइएको छ । ती नगद नोट तथा सिक्काहरुले कतै कोरोना भाइरस बोकेर हातहात र घरघर त पुगेको छैन ? एक गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले अधिकांश ती खाद्यान्न पसल, किराना पसल, फलफूल र तरकारी पसल आदिमा गई खरिद गर्दा रकम भुक्तानीको मितव्ययी, सहज, सरल र सुरक्षित तरिका क्यूआर पेमेन्ट हो । क्यूआर पेमेन्टमा कसैले केही छुनु पर्दैन । यो सिस्टम नेपालमा करिब एक वर्षअघिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, अझै पनि धेरै व्यवसायीहरुले यसको प्रयोग गरेका छैनन् । यदि यसको व्यापक प्रयोग गरेको भए, ग्राहकहरु बैंकको शाखासम्म पुगेर नगद झिक्ने र नगदको कारोबार गर्न वाध्य हुनुपर्ने थिएन भने व्यवसायीहरुले कोरोना संक्रमित नगद नोट पो आयो कि भनेर सशंकित हुनुपर्ने थिएन ।
कोरोना संक्रमण पूर्व नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजिटल पेमेन्टमा जोड दिने त भनियो तर कति सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो ? कति व्यवसायीलाई यो प्रविधिको बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जानकारी गराए त ? कति व्यवसायीले यसलाई सहर्ष आत्मसात् गरे त ? कति व्यवसायीहरु अब कारोबार जति कम्प्युटरमा तथा बैंकमा जाने भो, बढी कर तिर्नु पर्दछ भनेर डराए पनि । व्यवसायीहरुको यो डर हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कति सफल भए त ? हिजो गरेको पहल र कदम नै आजको परिणाम हो । नगदको प्रयोग कति घटाउन सकियो त ? अहिले बन्दाबन्दी सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आआफ्नो सामाजिक सञ्जाल एवं वेभसाइटहरुबाट डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै #StayHome #BankFromHome #MobileBanking #StaySafe #PayDigital जस्ता ह्यासट्यागलाई व्यापकता दिएका छन् । के अहिले बन्दाबन्दीको बेलामा यी ह्यासट्यागको कारणले डिजिटल बैंकिङ्ग बढ्ने हो र ? के आजभोलि, हिजो डिजिटल बैंकिङ्ग नभएका ग्राहकहरुले यो सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र? हिजो व्यापक रुपमा डिजिटल बैंकिङ्ग सेवामा बढी भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई आवद्य गर्न सकेको भए अहिलेको ह्यासट्यागहरुले सार्थकता पाउँथ्यो होला । तर अहिले यी ह्यासट्यागहरु सीमित ग्राहकको लागि मात्र लाभकारी छ तर पूर्ण उपयोग भने हुन÷गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
एकातिर देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । सरकारले कसैलाई घरभन्दा बाहिर ननिस्कनुस् भन्दैछ । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीमित शाखाहरु सीमित अवधिको लागि खोलेर कर्मचारी तथा ग्राहक दुवैले जोखिमपूर्ण सेवा दिन/लिन बाध्य भएका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले डिजिटल प्रणालीबाट बैंकिङ्ग कारोबार बढाउन त्यति चासो र प्रतिवद्धता देखाएको देखिँदैन । अहिले तीनै तहको सरकार कोरोना रोकथामको विभिन्न विकल्पहरुमा लागेका छन् । तर, नगद पैसाबाट सर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रियता देखिँदैन । नोट/नगदरहित कारोबारमा (डिजिटल बैंकिङ्ग) वृद्धि गरी यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन । यो समयमा ग्राहकहरुलाई सहज र सरल रुपमा (सकेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नआई) डिजिटल बैंकिङ्ग सक्रिय गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहल गर्नु पर्दछ यदि नियमक निकायको निर्देशन बाधक छ भने त्यो बाधालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले फुकाउनु पर्दछ ।
मानिसहरुको बढी आवतजावत हुने क्षेत्रहरु, हाल अत्यावश्यक क्षेत्रको रुपमा तोकिएको र दैनिक जीवनसँग गाँसिएको तरकारी पसल, खाद्यान्न, किराना पसल, मासुपसल, इन्धन तथा ग्यास स्टेसनजस्ता क्षेत्रहरुलाई नोट÷नगद रहित कारोबार (नगद मुक्त कारोबार) गर्ने अभियान यही बेला पनि चलाउन सकिन्छ । जुन अति जरुरी पनि रहेको छ र अहिले संक्रमणकालीन अवधिको आवश्यकता पनि हो । सुरक्षित कारोबारको लागी डिजिटल कारोबार गरौँ भनेरमात्र डिजिटल कारोबार बढ्ने होइन ।
अहिले धेरै नागरिकको बैंक खाता रहेको छ । त्यस्तै गरी अधिकांश व्यवसायीहरुको पनि बैंक खाता रहेको छ । त्यसैले संभव भएसम्म बढी भन्दा बढी नागरिकहरुलाई नगद रहित डिजिटल कारोबारको प्रोत्साहन गर्न सबै पक्षले आआफ्नो स्थानबाट पहल गर्न जरुरी छ । यो संक्रमण अवधिको लागिमात्र नभई राज्यले नोट छपाईमा गरेको ठूलो धनराशीको खर्चमा कटौती गर्न, विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगका किटाणुहरुलाई रोकथाम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नगदको चोरी, आगलागी वा अन्य प्रकारबाट हुने हानी नोक्सानीबाट जोगिन पनि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न उचित देखिन्छ । डिजिटल कारोबारमा रहेका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सिस्टमलाई सबलीकरण र ग्राहकहरुमा सचेतना जगाउन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आवद्ध सबै ग्राहकहरुलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाई डिजिटल नेपाल बनाउने महान अभियानमा योगदान गर्न नियमक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, ठूला तथा साना व्यवसायीहरु, तीनै तहका सरकारले आआफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ । अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने छन् ।
(लेखक : मुक्तिनाथ विकास बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ्ग विभागको सञ्चालन, लेखा तथा रिर्पोटिङ्ग इकाइ प्रमुख हुन् ।)
विदेशी नागरिकलाई मात्रै पास
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग